Intsingiselo yeecobra tattoos | Ukuzoba
Intsingiselo yeecobra tattoos
USusana godoy | | IiTattoos zezilwanyana, Iindidi zeetattoos
Iicobra tattoos aziqhelekanga kakhulu kodwa zodidi kwaye xa zenziwe kakuhle zinobuhle obumangalisayo. Iimpethu kwiinkcubeko ezininzi zithathwa njengenye yeenyoka eziyingozi kakhulu nezoyikwayo. Eyona ntsingiselo ixhaphakileyo kulula ukuyazi: umngcipheko, amandla, ubulumko, ukuzalwa kwakhona, ukuchuma, inceba kunye nokuba semagqabini, inokuba yintoni intsingiselo kuwe xa uthatha umvambo?
Kodwa kuxhomekeke kwiindawo kunye nexesha le-cobra tattoos banokuthetha izinto ezahlukeneyo kakhulu. Umzekelo kwifayile ye- IYiputa yamandulo Imfezi yayinxulunyaniswa nehlabathi elingaphaya kokufa kuba imfezi yafunyanwa engcwabeni likaTutankhamun njengomfuziselo wokhuseleko kufaro ongasekhoyo.
Kwaye xa iicobra zipeyintwe kwiindonga zeetempile oko kuthetha ukomelela namandla, kuba abantu abaphantsi komkhosi wephimpi baya kuhlala besoyika.
EIndiyaImfezi ixesha elide yathathelwa ingqalelo njengesona silwanyana singcwele kwaye yiyo loo nto iluphawu lwamandla amakhulu. Ukubona icobra kufutshane eIndiya kuthathwa njengemangaliso. Kwinkolo yobuBuddha inyoka ithathwa njengomkhuseli.
Asinakuyithandabuza into yokuba iimpimpi zinobuhle obukhulu kodwa kwangaxeshanye boyika, Kungenxa yoko le nto tattoo inokuba neentsingiselo ezininzi. Kwangokunjalo, ikwangumqondiso wohlaziyo okoko iinyoka zaphalaza ulusu kunye nokuzihlaziya. Mhlawumbi ngenxa yesi sizathu ikwabonwa ngabanye abantu njengophawu lokungafi kunye nokuhlaziywa kobomi.
Kwaye wena, zifanekisela ntoni ii-cobra tattoos? Emva koko ndikushiya igalari yemifanekiso ukuze ubone ukuba zintle kangakanani na njenge tattoo kodwa kwangaxeshanye indlela inkangeleko yabo enoburharha ebenza boyike nokuba kulusu lomnye umntu njenge tattoo.
1 Iindidi zeetattoo zecobra
1.3 Ngee roses
2 Apho unokufumana itattoo yecobra
Iindidi zeetattoo zecobra
I-3D okanye ii-tatoos ezinemilinganiselo emithathu basinika isitayile ngaphezu kwenyani. Kungenxa yokuba isixelela ukuba isilwanyana ekuthethwa ngaso kubonakala ngathi siphuma eluswini. Ukudityaniswa kwezithunzi, okunika isiphumo sokunceda kunye nomsebenzi omkhulu wegcisa lomvambo kuyakwenza umphumo oncomekayo. Ke ngoko, ii-cobra tattoos zinokuba nazo ezi nkcukacha eziza kubenza bagqame ngakumbi, nokuba uzinxiba ezingalweni, esifubeni okanye emilenzeni. Iya kuphila!
Sithetha ngokwenyani xa yonke into egqityiweyo yecobra ibalasele. Phakathi kwabo, zombini imilo, umbala, ulwimi, okanye intsini ziya kubandakanywa kuyilo lokunika oko imvakalelo yokwenyani xa uzoba. Ewe kunjalo, abahlali bephethe izithunzi esazitshilo ngaphambili, ukuba loo moya wohlangulo ubuyiselwe kwi-3D. Ukanti imvakalelo yokwenyani iyaqhubeka, eyongeza owona mqobo ungoyena ucacileyo. Kule meko, iitattoo zihlala zinobungakanani obufanelekileyo, phakathi okanye obukhulu, ukuze zonke ezo nkcukacha zibonakale zilungile.
Los Iicobra tattoos zineeroses banentsingiselo ecacileyo ayikho enye ngaphandle kwesilingo. Indlela yokujonga emva kwaye ubhekise kuEva, umyezo wase-Eden kumtyholi okwenyoka. Singayinika isimboli yokushiya ubumsulwa ngasemva ukuze uthathe inyathelo eliqinileyo ebomini ngokukhula. Ewe abantu abaninzi bafumana tattoo yolu hlobo ngenxa yobuhle bayo, ngaphandle kokunikela ingqalelo kwisimboli sayo.
Kwelinye icala, sinokunika umbala esiwuthandayo kwii-cobra tattoos, ukubonelela ngokwenyani kubo. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo komnye, asinakulibala iifayile ze- Isiphumo samanzi ekwahlala ikhona kwezi ntlobo zoyilo. Umdibaniso wee-shades ezenza ukuba isiphelo sokugqibela sibe namandla ngakumbi.
Apho unokufumana itattoo yecobra
Enye yezona zinto zintle kakhulu yingalo, ngakumbi xa kuziwa kwiitattoo zecobra. Ukusukela umbulelo kumfanekiso wayo, singazibeka zombini engxenyeni ephezulu yengalo kwaye siyivumele iye phambili, okanye ukhethe umphambili. Yonke into iya kuxhomekeka kubungakanani yoyilo olukhethiweyo. Abanye bakhetha ubungakanani obunengqiqo kwaye bahlala kwiindawo ezinobuchule, ngelixa abanye bekhetha into ebetha ngakumbi kwaye inyoka ihamba ngolusu.
Isandla naso asixolelwanga ekubeni nemfezi kufutshane naso. Kwelinye icala ungakhetha uyilo ngohlobo lwesacholo kwaye apho intloko ibonwa khona kwinxalenye ephezulu yesandla. Ewe kunjalo, abanye abantu bakhetha i Iitattoo ezincinci zecobra kwaye zikhanya kwiminwe, ngathi amakhonkco. Banokubonwa kwindawo yesandla kwaye yenye yezona zintandokazi. Njengoko sibona, ukhetho oluninzi olubandakanya ubungakanani. Kuba zisesandleni, zihlala ziyilo loyilo olunengqiqo.
Enye indlela yokuhamba umzobo wendawo yangasemva, ukusuka kwi-nape, inombhalo wephimpi. Ukongeza, kule meko unokukhetha i-inki emnyama kwaye uyidibanise neenkcukacha ngohlobo lwemikhonto okanye iintyatyambo, kuxhomekeke kukhetho lwakho. Kwakhona, uyilo lunokudityaniswa nobungakanani obuncitshisiweyo okanye luhanjiswe zezinkulu.
Los iiCobra tattoos esifubeni Bahlala befuneka kakhulu emadodeni, kodwa abekho mva kakhulu. Ezangaphambili zihlala zibonwa ngobukhulu obukhulu kunye nezazo, ngokuthe ngcembe ngakumbi kodwa zihlala ziyimvelaphi kwaye zimakisha uphawu lwazo kakuhle. Kwinki emnyama kunye nemiceli mngeni yebrashi, zihlala zikhetha ukhetho.
Njengakwinxalenye yengalo, xa sithetha ngolu hlobo iiTattoo kodwa emilenzeni, banokuba nokugqiba okufanayo. Ngaphezulu kwayo nantoni na kuba inokubonakala ngendlela enamatye, njengesacholo. Nangona uyilo olubonisa indlela inyoka ewunyusa ngayo umlenze nezinye iinkcukacha azikho mva. Ngaphandle kwamathandabuzo, iiyantlukwano ze tattoo ezinje zihlala zingenasiphelo.
La ukuvuna imfezi egxalabeni, inokuba yeyona yokuqala. Enye yoyilo emele obu buqobo yile isibonisa intloko yephimpi ukuba iphuma njani ukusuka egxalabeni kuye esifubeni. Ewe kunjalo, ngamanye amaxesha sinokufumana izimvo ngokuthe tye ezisusela egxalabeni ziye ezantsi entanyeni. Kule yokugqibela, baya kuhlala behamba neenkcukacha ezininzi ezinjengeentyatyambo.
Imifanekiso: Pinterest, www.voyageafield.com, www.tattoodaze.com, @ sararosacorazon.art, www.thewildtrends.com, peekinsta.com, es.tattoofilter.com, latatoueuse.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » IiTattoos zezilwanyana » Intsingiselo yeecobra tattoos
UAntonio Fdez sitsho
Molo Aurora, kule khonkco ungasithumela i-tattoo yakho ukuyipapasha kwaye uvumele abanye abafundi bayibone → http://www.tatuantes.com/enviar-tatuaje/
Ikhampasi yaphakama iitattoos
Intsingiselo yeewotshi zewotshi